ဤပြောင်းလဲခြင်းလူသတ်သမား (၅) ခုကိုတွန်းလှန်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ပြောင်းလဲမှုကိုတိုးမြှင့်ပါ။ | Martech Zone
မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုတိုင်းတာရန်နှင့်တိုင်းတာရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အွန်လိုင်းရှိပါက၎င်းသည်လူများဖြစ်သည် မင်! ကျွန်တော်တို့ဟာအသင်းရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာသူငယ်ချင်းတွေ၊ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့ဟာ Indianapolis မှာရှိနေတာကိုမနာပါဘူး။
ကနေနောက်ဆုံးပေါ်ဒေတာနှင့် infographic မင် သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်သောပြissuesနာ ၅ ခုကိုထောက်ပြသည် -
လူမှုမီဒီယာမှတ်ပုံတင်ခြင်း - အလွတ်မှတ်ပုံတင်ပုံစံများထက်လမ်းပိုကောင်းသောလုပ်ဆောင်ပါ။ အမှန်မှာ၊ သုံးစွဲသူ ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စတင်ပါကအကောင့်တစ်ခုကိုစာရင်းသွင်းမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်အသုံးပြုသူ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုစတင်ရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာဖြင့်ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်သည်
Flat Call-to-Action - စကားလုံးတစ်လုံးမှနှစ်လုံးတိုသောခလုတ်တိုစကားစုများသည်စကားဝိုင်းများကိုပိုမိုပြောင်းလဲစေသော်လည်း၊ တိကျသောစကားလုံးတစ်လုံးကိုထည့်ခြင်းသည်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကို ၃၂၀% တိုးစေနိုင်သည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ထည့်ပါ။ Now! သင့်ရဲ့စာကို Submit ပြီးနောက်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး - ယနေ့ပြောင်းလဲရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသော ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ တကယ်တော့၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမား ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းကအီးမေးလ်စျေးကွက်ဟာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုကောင်းကောင်းကောင်းကောင်းရတယ်ဆိုတာကိုသတင်းပို့ကြတယ်။ အဆင်သင့်!
အနှေးဝန် Times - ရှာဖွေရေးအဆင့်များဖြင့်သင့်ကိုမထိခိုက်စေပါ၊ ၀ န်ဆောင်မှုအချိန် ၂- စက္ကန့်တိုးခြင်းသည်သုံးစွဲသူစိတ်ကျေနပ်မှုကို ၃.၈% လျှော့ချနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်း ၀ င်ငွေဆုံးရှုံးမှုကို ၄.၃% တိုးစေပြီးကလစ်နှိပ်ခြင်း ၄.၃% ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်သုံးသပ်ချက်များ - အမည်မသိကုမ္ပဏီတစ်ခုအပေါ်ယုံကြည်မှုသည်အွန်လိုင်းအားကြီးမားသောအဟန့်အတားဖြစ်သော်လည်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသည်သိသိသာသာကူညီနိုင်သည်။ အမေရိကန်လူမျိုး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးသုံးစွဲသူ ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည်၎င်းတို့ရှိသည့် site တစ်ခုမှ ၀ ယ်ယူရန်ပိုများသည်။
ဤတွင်အပြည့်အစုံအချက်အလက်အပြည့်အစုံ၊ ကူးပြောင်းခြင်းလူသတ်သမားများကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက် Marketer ၏လမ်းညွှန်မှဖြစ်သည် မင်.
Tags: ပြောင်းလဲမှုများတိုးမြှင့်button စာသားအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကူးပြောင်းနှုန်းပြောင်းလဲခြင်းစာသားဘာသာပြောင်းအီးမေးလ်စျေးကွက်ပန်းချီပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းတိုးမြှင့်ပြောင်းလဲမှုများတိုးမြှင့်ဝန်ကြိမ်ထုတ်ကုန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များထုတ်ကုန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှေးနှေးသောအချိန်လူမှုမီဒီယာ loginလူမှုမီဒီယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းလူမှုမီဒီယာ signup ကို